Yimalini ukunqoba isigaba kuTour de France? - I-Tour De France
Main > I-Tour De France > Imali yomklomelo weTour de france - unquma kanjani
Imali yomklomelo weTour de france - unquma kanjani
Yimalini ukunqoba isigaba kuTour de France?
Kunemiklomelo engama-601,650 ngosuku ngalunyeisigabaiqeda futhi i-1,138,800 ihlukaniswe phakathi kwabagibeli abaphezulu abayi-160 esigabeni sokugcina jikelele eParis. Konkeonqobayokulo mjaho bazothola i-500,000. Amaqembu abelana ngemiklomelo yawo phakathi kwabagibeli nabasebenzi.ezimbili
Kalula nje, iTour de France ingumcimbi omkhulu wamabhayisikili wesizini, owenziwa ngokwesiko ngoJulayi. Ku-Tour, abagibeli abahamba phambili emhlabeni bancintisana ngezigaba ezingama-21 kulo lonke elaseFrance ngenani eliphakeme kakhulu lokuhamba ngebhayisikili, amasonto amathathu okugijima abawinile abahlukene nsuku zonke namajezi amaningi anemibala ehlukene okunzima ukulandela umkhondo, ngakho-ke sizoyidiliza kulo mhlahlandlela wabaqalayo we-Tour de Frost Yiluphi uhambo? ITour de France ingenye yezinkambo ezintathu zebhayisikili ezinhle futhi akunjalo? umjaho omkhulu kunayo yonke ekhalendeni ayikho imibuzo njengomnikeli i-tour de france iqukethe izigaba ezingama-21 ezisatshalaliswa ngaphezu kwamasonto amathathu manje isigaba ngasinye sinqunyelwe isikhathi, umholi womjaho kanye nomnqobi ophelele ekugcineni kunqunywa ukuthi isikhathi esiphelele sokuqalisa manje sesingeziwe Izinga eliphelele elibizwa ngokuthi ukuhlukaniswa okujwayelekile noma i-gcas okujwayele ukubizwa ngalo njengolokuqala ukudlula entanjeni esigabeni ngasinye kuklonyeliswa umpetha wasesteji, uhambo ngokuvamile luhlanganisa izinsuku ezimbili zokuphumula kungekho mjaho, yize abagibeli bephuma futhi benze ithanga ukugcina imilenze yabo inyakaza, kodwa bathatha lezi zinsuku ukuze baqinisekise ukuthi abashayeli bayalulama ukuze bakwazi ukugijima kanzima ngangokunokwenzeka ezinsukwini ezizayo ukwenza umjaho ujabulise ngangokunokwenzeka. Lolu hambo luqale ukusukela ngo-1903 lapho kube nokuphazamiseka okuvela eMpini Yezwe I naku-II, okwenza umjaho ka-2020 u-107 uqale ezweni elingumakhelwane njengeBelgium, iNetherlands, iGreat Britain nakwezinye izindawo, manje izigaba zokuqala zomjaho zivame ukwenzeka lelo zwe, kodwa-ke baya eFrance lapho beqala khona ukwaziwa ngokuthi iGrand Departall ngakho-ke izigaba zeTour de France ziwela kwesinye sezigaba ezinhlanu ezigaba zokuqala izigaba eziyizicaba lezi zigaba zivame ukuba nokuthambekela okuncane futhi zisetshenziselwe ukugijima umjaho phakathi kokuhambisa izintaba ezinqamula emaphandleni aseFrance, manje seziwinwa ngongoti esibabiza ngokuthi ama-sprinters, abafinyelela ijubane lamakhilomitha angaphezu kwama-70 ngehora, lapho begijimela entanjeni endaweni esheshayo, lapho-ke sinezintaba izigaba, manje izigaba zezintaba zohambo zingumcimbi oyinhloko nengxenye yomjaho, lapho wonke umuntu efuna ukuba yingxenye yawo, ababukeli nabagijimi lezi zigaba zisakazeka phakathi kwezintaba zaseFrance kanye ne-pyr enees kanye nalezi zigaba intaba eyizinkulungwane zamamitha ekukhuphukeni emasontweni amathathu ungagcina esiqongweni sentaba enkulu njengokufika kwengqungquthela noma kwesinye isikhathi ngemuva kokwehla kwentambo ende ngemuva kokukhuphuka okukhulu lezi zigaba zihlala zijabulisa kakhulu futhi izici ezinkulu zokuthatha isinqumo esivivinyweni esivamile sokuhlola isikhathi uma ufuna ukunqoba i-tourde france kufanele ube yisikhathi esihle sokulingwa ubizwa ngokuthi umjaho ophikisana newashi, ngoba ngumzamo womuntu ngamunye esigabeni sesikhathi lapho umshayeli ngamunye ngezikhathi ezimfishane Imizuzu eyodwa ngasikhathi, abagibeli ngokujwayelekile basebenzisa amabhayisikili akhethekile e-aerodynamic nemishini ukuhamba ngokushesha okukhulu ngejubane labo.
kungani amajezi okuhamba ngamabhayisikili ebiza kangaka
Izilingo zesikhathi zingenzeka kunoma iyiphi indawo, kusuka kumathrekhi asezingeni eliphakeme kakhulu kuya ezindaweni ezinamagquma ngisho nokukhuphuka kwezintaba okumsulwa kunikeza ithuba elihle ekumeni jikelele ukutshala isikhathi esiningi ezimbangini. Izilingo zesikhathi seqembu zibanjwa ngefomethi efanayo neyezivivinyo zesikhathi ngasinye, kepha ziqhutshwa yithimba lonke Manje iqembu ngalinye liphuma futhi lishayele ukwakheka okuyisisekelo, ake ucabange ukuthi izinyoni zifuduka ngale ndlela enkulu ye-V, lokhu kusiza ukuphula umoya nokugcina ijubane eliphakeme kakhulu njengezisebenzi entanjeni ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka. Manje iqembu lonke liqala ndawonye futhi okokugcina okunikezwayo umgibeli wesihlanu ukweqa umugqa wokuqeda, kepha imvamisa baqala ngabagibeli abayisishiyagalombili.
Ngakho-ke lapho benabashayeli abayisishiyagalombili kususwe abathathu lokho kunguhlanu, ngakho-ke bavamise ukuba nabashayeli abathathu abenza okusemandleni abo. Besijwayele ukujika uCalla ashise kahle, bazojula kakhulu uma bengase bashiye umugqa wokuqeda, ukuvumela lonke iqembu liqhubeke ngaphandle kwabo, laba bagibeli bavame ukuzigingqa ngejubane labo ukunikela ngeqembu labo umholi, manje isivivinyo sesikhathi seqembu, uma senziwe kahle, sibukeka njengomshini ofuthwe uwoyela sinezinzuzo ezinkulu ngaphezu kwamanye amakilasi, ulwa nalolu hlobo lomcimbi, ophumelele ngokuphelele kwiTour de France umgibeli oyedwa onesikhathi esiphansi kakhulu ekupheleni kwesigaba sama-21, esiphele kwiChamps-Elysees eParis kusukela ngonyaka we-1975, iqembu elikhulu labagibeli lise-The tour eyaziwa ngokuthi yi-Peloton thepelotonis inamaqembu angama-22 abashayeli abayisishiyagalombili, ngamunye wabo okuholela ku-176 abashayeli ekuqaleni. Iqembu ngalinye lakhiwa ngabagibeli abahamba phambili abakha ukuthi obani abenza izinkanyezi ezihamba phambili zamabhayisikili minyaka yonke.
Amaqembu wesigaba sesibili e-pro-Continental anamakhadi asendle futhi abhekwa njengamancane, yize amaqembu amakhulu manje esethubeni elihle lokuthi la maqembu abe ngamaqembu angamazwe ase-Continental ukukhombisa abaxhasi bawo emncintiswaneni omkhulu wesizini, ancintisane neBigworld Tour amaqembu futhi angaheha ama-scouts wethalente azobe efuna ukubasayinela uhambo lomhlaba ngesizini ezayo abashayeli bamazwekazi abenza umjaho ngamabhuleki ukunaka kakhulu abaxhasi babo, ngangokunokwenzeka, manje amaqembu ngokuvamile azogxila cishe umshayeli oyedwa noma ababili abaqokwe njengamaqembu abaholi beqembu bazohlose ukunqoba izigaba ngazinye noma umuntu ozongenela ukhetho ngokwezigaba inhloso yakhe ukunqoba iTour de France, iyonke, kanye nomholi wawo wonke amaqembu e-de s akhiwe ngemizi, okusho ukuthi izisebenzi zasemakhaya manje ezisekela abaholi bamaqembu abo, badela amathuba abo obuholi nokusiza iqembu ukufeza le thei r Abantu baseToredomestiq bavame ukugibela ekhanda leqembu ukunciphisa ijubane lokuhlaselwa kwehlisa umholi ovela emoyeni empeleni ukugcina ngokuphelele imithombo yamandla yomholi, abantu bendawo babuyela ezimotweni zeqembu ukuyolanda ukudla, ukuthola ama-oda, ukutholela abaholi babo amabhodlela ezimpahla zokugqoka, uma ngabe umholi wabo kufanele abe neyodwa Bebegqabule amathayi eceleni komgwaqo lapho imoto yakho ingeke ikufinyelele khona, unikeze ngokoqobo ibhayisikili noma ibhayisikili labo ukubabuyisela emijahweni manje ngokushesha ngangokunokwenzeka ngenkathi isigaba ngasinye sinomphumelele oyedwa futhi iTour inqotshwa ngumshayeli oyedwa kuphela esewonke. Lokhu kunqoba kungenxa yokusebenzisana okungenakulinganiswa kwabo bonke abalingani beqembu abayisishiyagalombili ngokubekwa nje, akekho noyedwa ongaphumelela i-tour de france yodwa akunakwenzeka ukuthi ukusebenzisana kwezaga zakudala kwenza iphupho libe yimpumelelo ukuvakasha kuyindlela enhle yemibala eguquguqukayo France le ngxube yamajezi esentsha enziwe ngama-logo abaxhasi abakhanyayo amaphethini ajabulisayo ngemibala egqamile impela Bheka phakathi kwawo wonke amajezi weqembu ojwayelekile ongawathola futhi uwaqonde kahle izingubo zakho manje, uzothola amajezi amane abaluleke kakhulu azonikezwa ekugcineni esigabeni ngasinye kumholi wesinye sezigaba ezine ezihlukene Ijezi eliphuzi iLe Mayo Jean yijezi eliyinhloko nelidume kakhulu labagibeli beTour de France abanesikhathi esiphansi kunawo wonke kuthrekhi kuze kube manje, ijezi liphuzi, ngenxa Umagazini waseFrance i-Auto, owakhuthaza lo mjaho ekuqaleni kwekhulu lama-20, wenziwa ephepheni elihlukile eliphuzi eliphrintiwe manje ogqoke leli jezi ekupheleni kwesigaba 21, iTour I-de France izuza inhlonipho yempilo yonke kontanga nakubalandeli ngokufanayo nangemali engumklomelo engama-euro ayizi-500,000 ijezi elimhlophe le-Mile Block ijezi elimhlophe lisho umshayeli osemncane ohamba phambili kulo mjaho lo ngumshayeli obekwe kahle kunabo bonke ngaphansi kuka-25. Januwari okokuqala onyakeni wokujaha ofanele 'ukugcina ijezi eliphuzi ngasikhathi sinye ijezi elimhlophe kulokhu ijezi eliphuzi selibekwe eqhulwini bese kuthi osendaweni yesibili umshayeli osemusha ekugqokweni konke agqoke ijezi elimhlophe ekugcineni kohambo Umshayeli osemncane ohamba phambili uthatha ama-euro ayi-20 000 Ijezi eliluhlaza elibizwa ngeLumaio ver yijezi lomgijimi phakathi nawo wonke umjaho Amaphuzu anikezwa umgibeli wokuqala owela entanjeni Amaphuzu atholakalayo anikezwa nsuku zonke, kodwa amaphuzu atholakalayo ayahlukahluka ngokuya ngesigaba sosuku ngaphezu kwalawa maphuzu, umzila wosuku ngalunye ugcwele lokho okubizwa ngokuthi yi-intermediate sprints ngaphambi komugqa wokuqeda Izinhlanga zihlala zimnandi.
Amaphoyinti okuqalisa wokuqeda anikezwa amaphuzu Kokubili kuma-sprints aphakathi nendawo naku-sprints yokuqeda futhi umshayeli onamaphuzu amaningi ekupheleni komjaho ugqoka ijezi eliluhlaza, manje leli jezi livame ukunqotshwa noma ukugqokwa ngumgijimi oqoqa amaphuzu lapho ewina izigaba futhi evame ukuphela kuma-15 aphezulu ngezigaba angazinqobi futhi ezintabeni eziphakeme ukulwela ama-outliers t ungavikela ama-sprints aphakathi naphakathi nezinsuku lapho ungenalo ithuba lokunqoba Intengo yejezi eliluhlaza kungama-euro ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu, ijezi elinamachashazi la moi linobuthi ngendlela efanayo kubangani bezinyathelo eziphakathi esiqongweni sendawo ngayinye ebalulekile yokukhuphuka kwabagibeli bokuqala ukufika phezulu, inani lamaphoyinti akhona liyahlukahluka kuye ngokuthi ukuklanywa kokuqwala Kunzima ngokwengeziwe ukukhuphuka amaphuzu amaningi manje ahlinzekwayo Umshayeli onamaphuzu amaningi asezintabeni ugqoka ijezi elinamachashazi bese egoduka nama-euro angama-25,000 ekugcineni kohambo. Masikhulume ngama-Sprinters ama-Sprinters ajwayele ukuwina izigaba ezicaba ukuzivikela emoyeni ngemuva kwalabo abasebenza nabo usuku lonke bezama ukuhlala eduze nendawo ephezulu yokugwema ukuhlukana phakathi kwezigaba zobuchwepheshe ukugwema ukushintsha inkambo ukushayisana komoya zonke izinhlobo zezinto zokuphambuka ngokoqobo kepha uma bezisola ngakho bangalokothi bathinte umoya futhi bahlala becathama ngaphambili kwe-peloton kuze kufike kumamitha ayikhulu okugcina, lapho beqhamuka khona ngemuva kozakwabo ababanikeze ukuhola okukhulu ukwephula ukunqoba ukuze bagijimele ukuya egoli Umgijimi ongakhipha amandla amaningi noma isikhathi esifushane futhi uyashesha kakhulu Ukuba umgijimi umsebenzi oyingqayizivele futhi oyingozi Abashayeli abawina ama-sprints bakuthola kunzima ukusinda ezintabeni eziphakeme Awuvamisile ukuzwa ngomgijimi encazelweni efanayo ekugcineni kohambo lomjaho wesivinini tendenzie ll amahora ngemuva kwabawinile bonke ekumeni konke, yize kungenzeka ukuthi uzuze izigaba eziningana kulolu hambo izigaba zezintaba ziyanqotshwa ngochwepheshe bokukhuphuka abahlanzekile laba bagibeli benza imisebenzi ekukhuphukeni futhi benza abagibeli abasheshayo bavame ukuba ngabagibeli abahlose ukuwina uhambo jikelele Kodwa umjaho futhi unabagibeli abangenantshisekelo ngejezi eliphuzi. Banomgomo owodwa kuphela, ukunqoba abafika engqungqutheleni nezintaba.
Manje umgibeli ofuna ukuwina lo hambo wonkana kufanele akwazi ukukhuphuka izintaba kahle kakhulu, futhi namandla okumele akhe izikhala ezinkulu kuligi futhi avumele izimbangi zabo zilahlekelwe yisikhathi esiningi ekumeni konke ku esisodwa swoop Izikhathi zesilingo somuntu ngamunye zibaluleke kakhulu emijahweni yasesiteji imvamisa kuzoba khona okungenani kanye kuhlelo ngalunye lwe-tour de france, kepha ezinye zengezwa ezimbili noma ezintathu noma ngisho nangaphezulu komholi weqembu onqobe izinga eliphelele kuhambo g efisa i-win kumele ikwazi ukwenza isivivinyo sesikhathi esihle isilingo sesikhathi esihlala isikhathi esiningi kusuka kumzuzu engama-30 kuya ehoreni, futhi abashayeli banamandla okuwina imizuzu ngaphambi kwezimbangi zabo uma bekwazi ukuba ngumncintiswano jikelele Ukunqoba ngamakhono Isivivinyo sesikhathi sizoba nenzuzo enkulu kunembangi ye-Agc ethembele kuphela ekukhuphukeni okusheshayo ezintabeni ukuthola isikhathi manje ngaphezu kwesivivinyo sesikhathi sokunikeza amabhonasi esikhathi sansuku zonke kubagibeli abathathu bokuqala ngaphezulu kwe-The finis h line ithatha imizuzwana eyisithupha kanye nemine endaweni yokuqala, yesibili neyesithathu endaweni yabesifazane iTour de France Esondele kakhulu ku-peloton yabesifazane IGrand Tour yamasonto amathathu yenzeka eGirorosa, umjaho wezinsuku eziyishumi ojwayele ukuqala ngoJulayi kanye nenkampani leyo ihlela indawo yokuvakasha futhi inkambo yomjaho wosuku olulodwa yowesifazane selokhu yabanjwa emzileni ofanayo nesigaba somjaho wamadoda iminyaka eminingana. Lokhu bekuyinkambo eyisicaba ezungeze ama-champs-elysees eParis obevame ukunqunywa yiqembu elikhulu labasubathi ubuso bebhayisikili labesifazane kuze kube phakade futhi kungaba yisinyathelo esikhulu maqondana nomdlalo olingana ngempela futhi ngokwami ​​ngiyazi ukuthi kungaba yinto emangalisayo ukwazi ukubona lokhu futhi uphile kahle nginephutha ngibona kanjani le ndawo esiyithandayo ukubona izivakashi emjahweni we-gcn zidlula kunjalo kodwa mhlawumbe siyabandlulula kancane kepha ngaphandle kohambo sinokunye okuningi okuhle izinhlanga unyaka wonke, kepha i-gcn yintsha? IRace Pass inakho konke ongakufuna, inazo zonke izinhlobo zezici ezinjengamaphrofayli esiteji, uhlu lokuqala, okuvelele nsuku zonke ngemuva kokuhlaziywa komjaho nezinye izinto eziningi ezinhle, inakho konke okudingayo, noma ngabe ungumbukeli onolwazi noma umjaho webhayisekili oshiseka ngokweqile okokuqala ngakhoke yi-tour de francethe enkulu ekhombisa umcimbi omkhulu ngokoqobo umcimbi omkhulu wonyaka emhlabeni wamabhayisikili ukuvakasha kuyisiqalo esihle uma ungakaze ubone imijaho yebhayisikili ngaphambili uma uthanda le ndatshana, siphe umoya futhi uma wazi othile okumanje uhamba ngebhayisikili futhi angahle afune ukwazi ngemijaho yamabhayisikili nohambo. Bathumelele le ndatshana ukuze ubathokozise, ​​ngiyabonga ngokubuka futhi sizokubona ngokuzayo
Libiza malini ibhayisikili iTour de France?
Vele, umgibeli ngamunye wenza ngokwezifiso okwakheibhayisikilingokuya ngezimo nezintandokazi zakhe, kepha ake sibheke izingxenye nezici ezifakiwe kumodeli yabathengi ezengeza ku- $ 11,500 ye-whoppingintengoumaki.
Iyini inzuzo kaPeter Sagan?
I-Peter Sagan inenani elifanele:UPeter Saganungumjaho wamabhayisikili ohamba ngomgwaqo waseSlovak one-imali engenayokwezigidi ezingama- $ 30.
(umculo onamandla) - Ngisendaweni eyimfihlo ephezulu ngaphambi komshicileli we-2019 Paris-Roubaix. Futhi nginalokho engicabanga ukuthi yibhayisikili elijabulisa kakhulu engake ngakubona. (umculo we-elekthronikhi) Manje isizathu sokuthi 'Ngijabule kakhulu' ngoba leli ibhayisikili likaPeter Sagan, elihle, imvamisa lijabulisa kakhulu.
Kepha ngaphandle kwalokho, yi-Specialty Roubaix entsha sha futhi ngiyaqala ukuyibona. Bengingazi nokuthi le nto izophuma, ngiqonde ukuthi, sekuphele iminyaka embalwa selokhu iRoubaix yasekuqaleni yashaya futhi imijikelezo yomkhiqizo imide kancane. Kepha wow, hlola iRoubaix entsha neRoubaix yangaphambilini.
Bese ngizokhuluma ngezinye zezinto ezincane ezenza leli bhayisikili lihluke kuPeter Sagan. Okokuqala, sine-Future Shock ngaphezu kweshubhu lekhanda ukuthola induduzo eyengeziwe lapho ushayela. Shayela phezu kwezindawo ezinzima ezifana ne-asphalt.
Yize beyishintshile, manje inesikhiye ngaphezulu ukuze ukwazi ukukhiya ukumiswa phezulu ngenkathi ushayela ku-tarm bese uyigcina ibushelelezi ukuze ungabi nakho ukumiswa kokumiswa bese uyifaka nje ukuze ulungise lokho. Kuhle lokho, akunjalo? Ushintsho olukhulu olulandelayo olusuka ku-Roubaixi lwangaphambilini futhi luyisimo sephrofayili yeshubhu. Ngakho-ke lawa afana kakhulu namapayipi atholakala ku-Specialized Tarmac entsha sha.
Zilungiselelwe ukuba zibe namandla adonsela phansi kakhulu siyabona ukuthi kushubhu esezansi nansi ithubhu yezihlalo, enengxenye emise okwe-D, eyisicaba emuva, kanye nesikhala sesihlalo, esimise okwe-D. Empeleni kubukeka sengathi yisihlalo esifana nesasikhona ku-asphalt, manje okuthunyelwe okwenziwe ngo-D kuyinto esiyibonayo kumabhayisikili amaningi we-BMC namabhayisikili amaGiant futhi kunezinzuzo ezimbalwa. I-aerodynamic ethe xaxa, kepha futhi iyisicaba ngemuva, ingahlehlisela emuva ngaphezulu, okubaluleke kakhulu ekunikezeni ukunethezeka okwengeziwe emjahweni ofana neParis-Roubaix.
Ekhuluma ngokuthunyelwe kwesihlalo, futhi inokuxhumana okubuyekeziwe kufreyimu. Lo mklamo ohluke ngokuphelele kuneRoubaix yangaphambilini. Ngakho-ke sinalesi sigqoko se-polymer ongasusa lapho ungabona ukuthi kukhona igebe elikhulu lapho, elihloselwe ukunika isihlalo okuthunyelwe okuncane kohambo ngaphakathi kohlaka nokuqinisa okubaluleke kakhulu ukuzama ukukhululeka , okubalulekile emjahweni onjengoParis-Roubaix imininingwane yibhokisi lokuhlangana, manje elingene kahle ngobunono kushubhu phansi.
Okuthile esikubonile emabhayisikili amaningi amasha esikhundleni sokuzungeza ngaphansi kwesiqu. Kuhle. Ngakho-ke lokhu umehluko omkhulu phakathi kweRoubaix entsha neRoubaix yakudala, kepha leli ibhayisikili likaSagan, ngakho-ke yini ekhetheke ngayo, yini eyenza ihluke kuye? Nawu umsebenzi okhethekile wokupenda futhi leyo yinto esikujwayele kusuka kuPeter Sagan Kuyamangaza futhi kunamalogo ambalwa wensimbi kaPeter Sagan amalogo kukhona ilogo eyodwa negama elihle elikhomba njengamaSagane.
Kukhona futhi imichilo emincane emithathu ngemuva lapha lapho kuhlala khona amaketanga. Lezi zingcwecwe zensimbi ezibonisa ukunqoba kwakhe ubuqhawe obuthathu bomhlaba. Ngakho-ke iRichmond, iDoha neBergen, kuhle lokho.
Kepha lo umsebenzi wopende ocashile kakhulu kaPeter Sagan. Imvamisa sijwayele ukubona imiklamo ebabazekayo kakhulu kuye eminyakeni edlule. Kepha ngiyayithanda impela. (umculo othulile) Njengoba lokhu kuyibhayisikili likaSagan leRoubaix, kunezinguquko ezimbalwa zamagiye ezibalulekile lapha ezihlukile kunoma yiliphi elinye ibhayisikili angalisebenzisa sonke isikhathi sesizini, kanye nokuthi usebenzisa iDura Ace Di2 sonke isikhathi, kungcono okufanayo ngazo zonke izithuthuthu zakhe.
Kepha i-crankset yehlukile, ngakho-ke esikhundleni se-53/39 yakhe ejwayelekile uno-53/44 ngemuva. IRoubaix umjaho oyisicaba kakhulu futhi abashayeli bathanda isilinganiso esiseduze sika-53 kuya ku-44. (Umculo othokozisayo) Ngemuva sinekhasethi elingu-11/28 futhi uzobona nokuthi ama-ceramic speed bearings afakwa yonke indawo.
Amasondo angamathayi we-Roval 50 millimeter amashubhu futhi abhanqwe nalawa angamamilimitha angama-30 akhethekile amasondo ka-S-Works Turbo Cotton. Lokhu kukhulu impela, kubanzi impela. Futhi ngatshelwa ukuthi ingcindezi ezosebenza kuyo izoba phakathi kwezinsuku ezingama-4 1/2 no-6 zebha, noma ngabe zimanzi noma zomile.
Ngokuthokozisayo, omakhenikha bangitshela nokuthi ngenxa yokuqina kweFuture Shock, empeleni bayakwazi ukufaka ingcindezi ephakeme kumatayi uma befuna. Isihlalo sikaSagan sokuzikhethela kunguRomin EVO oyingcweti futhi kuyathakazelisa ukuthi inokubekwa emuva kwesihlalo futhi isihlalo sibuyele emuva kujantshi ngaso leso sikhathi. Okuthile okunika kakhulu i-sag ngombono wami ngoba isihlalo sehhashi sinokuphakama okuthe xaxa.
Ku-crank uzobona ukuthi nayi imitha kagesi ekhethekile, le yinsimbi yokulinganisa emaceleni amabili. Kukhona ne-pod ekhakhini ohlangothini olungashayeli. Futhi izingalo ezi-crank zingamamilimitha ayi-172.5 ubude.
Ngiphinde ngisebenzise ama-Dura-Ace pedals, kepha uSagan unezinsimbi ezide ezingama-4 millimeter, okunikeza i-Q-factor ethe xaxa. Kuyaqondakala ngoba uma umbona ehambisa imilenze yakhe kubukeka sengathi iqhelelene kancane, kunjalo, lokho kuyathandeka impela. Manje ku-cockpit futhi ngithola lokho kuthakazelisa ngempela.
Into yokuqala elawula iso ukuthi isiqu saso side kangakanani, ubude baso bungamamilimitha ayi-140 futhi yisiqu se-S-Works esinendawo engaphandle ehlanzekile yeWahoo BOLT yaso. Ngiyakuthanda lokho kakhulu, kucocekile kakhulu, kuhle. Futhi leyo yindawo yokubamba yamasentimitha engu-PRO Vibe 42.
Kuyathakazelisa ukuthi iyisibambo esiyindilinga. USagan uvamise ukusebenzisa i-aero handlebars, i-aero cockpit kule sizini, kepha kuRoubaix waya ebha eyindilinga enokuthambeka okuthe xaxa futhi futhi kunethezekile ukubambelela ku-canopy futhi. Kepha enye yezinto ezithakazelisa kakhulu kimi ukungabi khona kokulungiswa kule ndawo yamapulangwe.
E-Roubaix sibona ubuchwepheshe obuningi obuyinqaba nobuhlanya futhi imvamisa ubona ama-levers wamagiya angeziwe, ama-levers angeziwe amabhuleki, itheyiphu yesibambo esongwe kabili. Kepha lokho kulula impela, ngithanda ukukuthanda lokho. Kepha ngiyayithanda itheyibha lakhe lesibambo, lena yithephu yesibambo yeSUPACAZ futhi izwakala inamathela kakhulu, kumnandi ubezibuza ukuthi usayizi webhayisikili uPeter Sagan ugibele, awu, ungama-56, nawo ofana nami. (ngihleka) NginguPeter Sagan, akunjalo? Hhayi-ke, ake sihlole umsindo ozimele. (Isondo liyajika) Smooth. (Isondo liyajika)) Lizwakala kakhulu.
Omunye umehluko ovela kuRoubaix wangaphambilini engiwutholile ukungabi khona kwezigwedlo zangaphambili nangemuva zembazo. Esikhundleni salokho, iyafana namanye amabhayisikili lapho isigwedlo empeleni sisuswa khona ngaphambili kokuhlanza kakhulu, futhi uma ubheka akukho ukunamathela kwesigwedlo, okwenza ibhayisikili libe namandla ashushe ngokwengeziwe. Abanye abantu bacabanga ukuthi i-watt noma ezimbili zibaluleke kakhulu futhi ukususa amasondo noma ukushintsha amasondo imishini empeleni inohlobo olukhethekile lwenganono yebhokisi njengoba ubona kuFomula 1.
Nginomakhenikha njengamanje ukukala ibhayisikili likaSagan njengoba lisenguqulweni yalo egcwele yomjaho futhi ngilinganisa amakhilogremu angu-7.91. Ngakho-ke hhayi ibhayisikili elikhuphukayo elikhanyayo, kepha akuyona into oyifunayo eRoubaix.
Bafuna ibhayisikili eliqinile futhi eliqinile futhi elinethezekile nelikwazi ukuphatha amatshe ayigobolondo, ngethemba lokuthi yilokho. Manje ngithemba ukuthi uyithokozele le ndatshana futhi uma kunjalo sicela usinikeze isithupha uphinde ubhalisele iSiteshi se-GCN ngoba sizosisiza ukwenza ezinye izindatshana ngokuzayo. Kepha usazise emibhalweni engezansi ucabangani ngaleli bhayisikili elisha elikhulu.
Ngiyayithanda ngicabanga ukuthi ibukeka inkulu futhi ngiyazibuza ukuthi izophumelela yini ngeSonto? Noma kunjalo, ukuthola okwengeziwe ngeParis-Roubaix- Okuqukethwe ungachofoza ku-chain-44 chain chain evela kwa-Sag.
Ngabe abagibeli bamabhayisikili bazicupha bona?
Namuhla, abasubathi abasezingeni eliphakeme bazovelebadonsa amabhulukwe abobese uqhubeka. Gcina engqondweni ukuthi kwenzekani laphoabagibeli bamabhayisikilibaphoqelekile ukubadonsa amabhulukwe abo. Ochwepheshe bancintisana baze bafike ezingeni lokuthi umzimba wabo ungaphezu kwengcindezi kuba sengathi iyafa.amashumi amabili nanye . 2015.
Ochwepheshe bahlala emabhayisikili abo futhi bachitha amahora namahora esihlalweni. Futhi ngiqonde ukuthi, benza izinto ezinhle ezixakile, futhi ngiqonde ukuxaka impela. - Kuyamangaza ngempela.
Futhi kule ndatshana sizochaza ukuthi, - (uyahefuzela) Uyanuka! - Futhi noma lokho - (ebubula) ngikhululekile - O Nkulunkulu wami - Strange. (I-siren siren) - Ezinye izinhlanga zinde impela - iSan Remo, ngokwesibonelo, ngaphezu kwamahora ayisikhombisa, futhi kwesinye isikhathi udinga nje ipee! Mhlawumbe unenhlanhla futhi kuzoba nokuthula futhi ungama uzikhulule. Kepha esikhathini esiningi uzothola ukuthi umjaho usushubile impela futhi udinga ukunyakaza.
Uxolo umzuzu nje. Kodwa-ke, ungakhathazeki ngokulahlekelwa ukuxhumana neqembu. Ungahlala ucela usizo kumuntu osebenza naye. - Kulungile, mlingani, nginakho. - Hhayi-ke mhlawumbe besingeke sincome ukuthi ukwenze lokhu lapho ugibela iklabhu lasendaweni, kepha emjahweni kungaba umehluko phakathi kokuwina noma ukwenzela ukwehlulwa.
O, bengikudinga lokho! Manje into eyodwa okufanele yenziwe kahle, ukushintsha njalo ukuhlelwa kwezingubo zabo ukuze kuhambisane nezimo ababhekene nazo. Sonke siyazi ukuthi bahle kakhulu ekugqokeni nasekuthatheni ikapa lemvula! Kepha uma unaka, ungabona kungavamisile ukutholwa futhi ngokungagwegwesi kujabulise kakhulu ibanga lasentshonalanga - kungenzeka ukuthi uke wambona uSagan ebeka ibhayisikili lakhe phansi maphakathi nomjaho futhi wazibuza ukuthi ulwenza kanjani ngenkathi ephethe ibhayisikili ligcina amakhono athuthukile , ikakhulukazi lapho kulungiswa i-handlebars, kepha ochwepheshe balungisa amabhayisikili abo ngaso sonke isikhathi. Isethingi esivame kakhulu ukulungisa amabhuleki, ikakhulukazi uma unebhayisikili elinamabhuleki erimu.
Okubi kakhulu ngochwepheshe ukuthi amabhuleki akho agudla umphetho. Ngakho-ke ukuxegisa izilungisi zemigqomo kuyikhono umqeqeshi okufanele abe nalo kuze kube ku-T. Empeleni, ukulungiswa kwamabhuleki erimu, lapho kwenziwa eduze kwemoto yeqembu, kubonakala kunenkinga ejwayelekile yomshayeli webhayisikili - Ekhuluma ngokulungisa izinto, Ikheji lami lebhodlela liyaphuma.
ujimmie johnson uhamba ngebhayisikili
H Unalo ithuluzi kimi? Ah! Kuhle! - Ukukhipha amadolo ami - noma ukufudumeza imilenze kuma-godos kubukeka njengekhono elinzima ngempela lokulwazi. Kepha ngezinyathelo ezifanele, kuyenzeka. Lokho kusho, izinzuzo zenza kubukeke kulula kakhulu futhi kungumbombayi.
Futhi ngiqonde ukuthi, kunzima ngezifudumezi zomlenze kunalezi ezifudumeza amadolo, kepha yindlela owenza ngayo lokho ((Dan) Isinyathelo 1: nyusa okufudumeza amadolo emaqakaleni akho. Isinyathelo sesi-2: Gingqa imfudumalo yakho ezungeze iqakala lakho eduze kwesenzo sakho.
Isinyathelo 3: Susa isicathulo sakho bese udonsela ku-cleat yakho, futhi usuqedile. Isinyathelo 4: nqampuna futhi ufake idolo elifudumele ephaketheni lakho bese likulandelayo. Ukuthatha ukudla neziphuzo onqenqemeni lomgwaqo kungenye ikhono elibaluleke kakhulu lochwepheshe futhi kungabaluleka kakhulu, njengaye ekubhekaneni nengxenye yesibili yomjaho webhayisikili.
Cishe yonke imijaho inendawo yokudla ngemuva kwamakhilomitha angaba ngu-90, njengoba kunjalo umshayeli uzodla amabhodlela ambalwa okuqala nokunye ukudla kwawo. Izindawo eziqokiwe zokuphakela kulapho abagibeli bemisa izimoto bese besabalalisa amabhodlela. Lapho umshayeli efuna ukubamba ibhodlela, utshengisa iqembu ukuthi ufuna ukuphuma, ame eceleni komgwaqo, welule isandla, athole lo soigneur ogqoke izingubo ezifanayo bese ebamba ibhodlela. ngoba izindawo zokondla zivame ukuba lapho umjaho ushesha khona - ukunwebeka: lokhu kuzwakala kulula impela manje, kepha uma ugijima awunalo ilungelo lokwenza i-yoga poses.
Ngakho-ke uyelula kanjani ibhayisikili - (Chris) Ngakho bakwenza kanjani lokho? Ukwelulwa okuvame kakhulu okwenzelwe ama-quads akho. Khumula izicathulo zakho bese ugoba imilenze yakho ngemuva kokuphumula unyawo lwakho esihlalweni sakho. Futhi uma ufuna ukwelula ujule hlala emuva ngonyawo lwakho.
Lapho unayo, izinzuzo zenza izinto ezithile ezixakile. - Kepha uma ungeyena umgibeli wamabhayisikili okhokhelwayo, awudingi ukuzama noma ikuphi kwalokhu. - Cha, kungenzeka lokho kuyiqiniso.
Futhi uma uyithandile le ndatshana bese uyinikeza isithupha esikhulu - Futhi ukuthola enye i-athikili, kuhlole lokho, buza ochwepheshe.
Ubani umgibeli wamabhayisikili ocebile kakhulu emhlabeni?
UChris Froome (Ithimu Yezulu)
Ungumsubathi wezinkanyezi weacebe kakhulu emhlabenifuthi iphumelele kakhuluukuhamba ngebhayisikiliiqembu.
Bahola malini abagibeli bamabhayisikili?
Abagibeli be-pro bezwekaziyenzanoma yikuphi kusuka ku- $ 26,200 kuya ku- $ 171,200. Uma abagibeli bekwazitholakudlule leli phuzu, kepha, i-inkokhelo itholaezuzisa kakhulu. Umgomo wokugcina weabagibeli bamabhayisikili abaningi, nokho, kufaneleyenzayangena ku-UCI World Tour, lapho umholo omncane uyi- $ 2.35M.06.29.2020
Ingabe ama-triathletes achama ngebhayisikili?
Ukuchama. Ukuqala komncintiswano kushukumisa imizwa kwabaningibhabha. Ngaphandle kokubheka abajahi ababalandelayo, abanyebhabhabazozikhulula ngenkathi begibele i-ibhayisikili, bese ulandela itayitela ukhiphe ibhodlela lamanzi.
Kungani umgibeli webhayisikili ephuca imilenze?
Esinye sezizathu eziyinhloko zobuchwephesheabagibeli bamabhayisikili baphuca imilenze yaboukwenzayaboukuvivinya umzimba njalo ngemuva kokuhamba ngokunethezeka. Esinye isizathu sokugundaukwelapha ukuqhuma komgwaqo noma okunye ukulimala ngemuva kokuwa kulula ngaphandle kwezinwele ezisendleleni. Amabhandeshi angasetshenziswa ngqo esikhunjeni.
Ngabe abagibeli bamabhayisikili bayachama ngenkathi behamba ngebhayisikili?
Abanye abagibeli bayama eceleni komgwaqo ukuze bafune i-uchame. I-peloton ingazihlela yona, ikhethe indawo ethi 'break break'ngesikhathiabagibeli abazozihlanganisa ngokuhlanganyelauchame; enkambisweni yeGrand Tour iyala ukuthi umholi we-GC anqumeninilokhu kuzoba njalo.
Kungani abagibeli bamabhayisikili begqoka izingubo eziqinile?
I-Aerodynamics. Esinye sezizathu ukuthiukuhamba ngebhayisikiliizikhindi zinjaloziqinileingeye-aerodynamics. Akunakuphikwa ukuthi okusondele kakhulu emzimbeni wakho, ukumelana nomoya okuncane kuzoba khona, ngakho-ke kukuvumela ukuthi ugibele phambili, ngokushesha nangomzamo omncane.
Ihlukaniswa kanjani imali yomklomelo weTour de France?
Wonke amaqembu eTour de France anezindlela ezahlukahlukene zokwabelana ngemali yomklomelo, kepha imvamisa ifakwa ebhodweni futhi ihlukaniswe phakathi kwabo bonke abagibeli (futhi imvamisa abasebenzi) eqenjini ekupheleni komjaho. Ukuhamba ngebhayisikili ngumdlalo weqembu onqobayo ngawodwana, ngemuva kwakho konke.
Ngabe uPeter Sagan uthola malini ngokuwina iTour de France?
UPeter Sagan uhlanze ukuhlukaniswa kwamaphuzu eminyakeni edlule kodwa uSam Bennett wamxosha ejezi eliluhlaza okotshani ngo-2020. Njengejezi le-polka dot, usuku ejezi eliluhlaza okotshani ngo-2020 lwalubiza u- € 300 - ngakho-ke lowo ngumklomelo omkhulu imali eqonde kuPeter Sagan emsebenzini wakhe weTour de France.
Uthole ini uTadej Pogacar ngokuwina iTour de France?
Umnqobi ophelele uthole ama- € 25,000, kwathi indawo yesibili yathola i- € 15,000. UPogačar uphinde wathatha umklomelo weKing of the Mountains ngo-2020, kanye nokuthola ukunqoba okuphelele futhi, ngokuzenzakalela, umgibeli osemusha ohamba phambili.